China Nyoro PVC Pin mabheji fekitori uye vagadziri | SJJ
Yakapfava PVC lapel pini dzakanyanya kupfava, zvine mavara uye zvisina kuremerwa. Tsika dzePVC zvinyorwa zvakanaka kune zvigadzirwa zvekushambadzira, zvinowanikwa nematanho maviri, 3D dhizaini uye yakadhindwa logo mune yakasarudzika tsika tsika.
Pini mabheji anowanzo shandiswa mune dzakasiyana zviitiko senge zvikoro, mapato, kukwidziridzwa, zviyeuchidzo kana zvipo. Kana iwe usingade mabheji echando echando, iwo Soft PVC pini mabheji ndizvo chaizvo zvinhu zvaunofanira kusarudza. Iwo maSoft PVC pini mabheji akapfava paruoko kunzwa uye kupenya pane mavara kupfuura esimbi pini mabheji. Mazhinji magadzirirwo ezvinyoro zvePini pini mabheji mifananidzo yekatuni, saka inogamuchirwa nevana nevabereki vavo. Iwo marogo anogona kuve akagadziriswa mune zvidiki diki senge kuzadza kwemavara, mamwe ekudhinda akadhindwa zvakanamirwa uye zvichingodaro. Saizi inogona kuve diki kana hombe, maumbirwo anogona kuitwa zvinoenderana nechikumbiro chako.
Iwo maSoft PVC pini mabheji anodhura uye anokodzera kukwidziridzwa. Iyo yakazara seti yeSoft PVC pini mabheji ane akasiyana mavara anozivikanwa pakati pevechidiki kwesangano kana timu chivakwa. Yedu yakapfava pini pini mabheji ndeemamiriro ekunze, anogona kupfuura ese marudzi ebvunzo zvinodiwa. Ichasangana nezvido zvako kwete mitengo chete asiwo mhando. Saizi dzakasiyana siyana dzinogamuchirwa, uye maodha makuru anozowana mitengo iri nani.
Kugadzirwa kwedu kweSoft PVC pini mabheji kunogona kupedzwa munguva pfupi nemhando yepamusoro. 1 zuva rekugadzira mifananidzo, 5 ~ 7 mazuva emasampuli, 12 ~ 15 mazuva ekugadzira. Izvi zvinokubatsira iwe zvakanyanya pane zvigadzirwa zvekuwedzera. Kurema uremu zvakare kunobatsira iwe kuchengetedza mutengo wekutumira. Yakanakisa sevhisi inozopihwa nekukasira pese patinogamuchira zvaunobvunza.
Colors: Colors inogona kuenderana PMS ruvara
Zvakajairika Zvakabatanidzwa Sarudzo: Simbi kana PVC bota kubhururuka zvikwambo, chengetedzo nembambo, magnets a, sikuruwa uye nzungu, uye vamwe pane chako chikumbiro
Hapana MOQ kukamurwa
Pashure: Yakapfava PVC Zipper Inodhonza
Zvadaro: Nyoro PVC Labels
Tsika Pin Mabheji
epurasitiki lapel pini
mapini epurasitiki mabheji
nyoro pvc bheji
nyoro pvc lapel pini
Yakapfava PVC lapel pini